zimbabwe - NetNaija
View all articles tagged 'Zimbabwe'
Born in east Zimbabwe, where relatives remember an "active and confident" boy, he spent 10 years in jail during the struggle, gaining O-levels and A-levels and eventually a law degree, then returned to fighting in the bush.
Zimbabwe's economy is currently struggling to grow and the country is experiencing a cash shortage.
The Vice President of Zimbabwe has been removed from his post by the President of the country, for being disloyal.
A yet to identified married woman, has scored an 'own goal' after reportedly forgetting to delete photos of herself and her lover having a good time half n*ked at a lodge in Zimbabwe.
Zimbabwe's security forces say there are reports of looting and illegal occupation of farms and houses following the resignation of former President Robert Mugabe and the inauguration of his successor, Emmerson Mnangagwa.
Students Threaten University of Zimbabwe VC to Revoke Grace Mugabe's PhD or Step Down
life like 3199
young billionaires 0
roast of justin bieber 0
crime movie 361
it is a schoolgirl thing 2070
sandiot kid 0
Date: Tue, 11 Aug 2020; 04:28pm (UTC+01:00)